Yepamberi Mukurumbira Kuongorora kweemail Vatengesi | Martech Zone
Yepamberi Mukurumbira Kuongorora kweVanotengesa Email
Muvhuro, Kukadzi 2, 2015 China, Gunyana 1, 2016 Douglas Karr
Takanyora nezve 250ok munguva yakapfuura uye ivo vanoenderera mberi nekuvandudza kwavo kwekupihwa zvipo. Mazhinji makuru evashambadzi veemail haatomboziva kuti vanogona kuve neepamusoro chaizvo zvikamu zvekuburitsa, asi yavo email inogona kunamatira mune yeSAMP firita. Kununurwa zvinongoreva kuti meseji yakaunzwa… kwete kuti yaigadzira inbox. Nepo dzimwe mhinduro munzvimbo ino dzichidhura, 250ok mhinduro inogoneka izvo zvinopa zvakatowanda kugona - uye nhasi ziviso yavo yeemail mukurumbira kushambadzira kunoitora iyo imwe notch!
Mukurumbira Informant inopa kuoneka uye nzwisiso iwe yaunoda kuti uone chinetso chekutumira mameseji pane ako anobuda matsamba hova pamwe nehunyanzvi hwekuyedza kana kutumira zvisiri pamutemo izvo zvinogona kukuvadza zita rako. Rumbidzo yakakwana kune yedu Inbox uye blacklist yekutarisa maturusi, Mbiri Informant inoongorora yako IP kero uye madomeni uye inopa izvo zvakakosha kuti utore kugadzirisa matanho kana dambudziko ramuka.
250ok ishamwari yedu - tinovashandisa kuongorora zvedu email mukurumbira - uye ichi chinhu chitsva chinopa vatengesi veemail maviri akasarudzika mashandisiro ekushandisa maturusi - kugona kuongorora yavo marangi pakurwisa hunyengeri tsamba uye spam misungo.
Dzivirira Brand yako kubva kune Phishing, Spamming uye Spoofing
250ok Mukurumbira Informant inobvumira vatengesi veemail uye vanopa rubatsiro emaimeri kuti vaongorore madomeni avo nekuda kwekutumirwa neemail kana mvumo yekubiridzira. Kumhan'ara kunokutendera kuti uone uko tsamba yekunyepedzera iri kubva - yakaputswa neIP nenyika. Unogona kuona mameseji emameseji uye woona kuti vapambi vari kuyedza kuendesa vatengi vako.
Dzivirira Brand yako kubva kuemail Spam Misungo
Chengeta yako email zvinyorwa mutengi kubva kuemail adhiresi ayo akawedzerwa kumisikidza yako brand uye kukumisa iwe muSAMP misungo iyo inokonzeresa kwakashata kuburitsa kana kuvharira zvachose neInternet Service Provider. 250ok's Reputation Informant inobvumira vatengesi veemail kuti vawane ruzivo rwakakomba mune yavo yekunze tsamba yekuita uye kuti vaone zvinhu zvinokanganisa mukurumbira wavo.
Iwe unogona kuongorora yako email zvinyorwa uye nekuona zviri nyore kuti ndeapi IPs, email kero, uye domains ari kutumira yakaipa tsamba. Kana iwe uri Email Service Provider, iwe unogona zvakare kuona kana kana kwete vako vatengi vane chaiyo yekusimbiswa (DKIM, SPF zvinyorwa) munzvimbo. Yese yedhata data inogona kutumirwa pasi kune yega mameseji.
Kana iwe uri kutumira mazana ezviuru emaimeli pamwedzi, unogona kunge uchisiya mari yakawanda patafura nekusaongorora mbiri yako yeemail. Saina demo re 250ok nhasi!
Tags: 250okemail mukurumbiraemail mukurumbira manejimendiphishingphishing kuongororaspamspam misungo
Ndekupi Vashanyi Vanodzvanya pane Blog?